GOD မှာ ဗိုလ်ကျနေတဲ့ လီဗာပူး ၊ မထင်မှတ်အောင်ကောင်းနေတဲ့ အိုင်ယက်စ် ၊ ရွှေဘောလုံးဆုအကြောင်း ပေါက်ကြားလာမှုတို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
GOD မှာ ဗိုလ်ကျနေတဲ့ လီဗာပူး ၊ မထင်မှတ်အောင်ကောင်းနေတဲ့ အိုင်ယက်စ် ၊ ရွှေဘောလုံးဆုအကြောင်း ပေါက်ကြားလာမှုတို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ လီဗာပူး ဟာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၂ – ၀ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး အုပ်စု ပထမ နေရာကို ဆက်လက် ရယူ ထားခဲ့ ပါတယ် ။ အေစီမီလန် ကတော့ ပေါ်တို နဲ့ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့တာကြောင့် မရဏ အုပ်စုမှာ ပထမဆုံး အမှတ်ရသွား ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
PSG ကတော့ လိုက်ပ်ဇစ် အသင်းနဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့တာကြောင့် အုပ်စု ပထမ နေရာကို မန်စီးတီး ထံ လွှဲပေး ခဲ့ရ ပါတယ် ။ PSG ကွင်းလယ်လူ ဝိုင်နယ်ဒမ် ကတော့ ဒီပွဲမှာ အသင်းအတွက် ၂ ဂိုးစလုံးကို သွင်းပေး ခဲ့ပြီး အသင်းသစ် အတွက် စတင် ဂိုးသွင်း နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။
နယ်သာလန် ကလပ် အိုင်ယက်စ် ကတော့ ဒေါ့မွန် အသင်းကို ဂျာမန်မြေပေါ်မှာပါ သွားရောက် အနိုင် ကစားခဲ့ပြီး အုပ်စု အဆင့် ကနေ နောက်တဆင့် ကို တက်ရောက် သွားနိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အုပ်စု ပွဲစဉ် ၄ ပွဲ ကစားအပြီးမှာတော့ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ၊ အိုင်ယက်စ် ၊ လီဗာပူး နဲ့ ယူဗင်တပ် အသင်းတို့ နောက်တဆင့် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိ ထားကြပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ခံစစ်မှူး ရာဖေး ဗာရန်း ဟာ အတ္တလန်တာ နဲ့ ပွဲမှာ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့် တလ ခန့် အနားယူရ တော့မယ့် အကြောင်း အသင်းဘက်က အတည်ပြု သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဗာရန်း ဟာ မန်ချက်စတာ ဒါဘီ အပါအဝင် ချဲလ်ဆီး ၊ အာဆင်နယ် တို့နဲ့ ကစားမယ့် ပွဲတွေ အထိ လွဲချော်ရတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကာတာ ကလပ် အယ်လ်ဆတ် အသင်းရဲ့ CEO ကတော့ သူတို့ နည်းပြ ဇာဗီ နဲ့ ဘာစီလိုနာ တို့ရဲ့ သတင်းတွေ ကို ထပ်မံ ငြင်းဆို ခဲ့ပြီး ဇာဗီ ဟာ ကာတာ ကလပ် ကနေ ဘယ်ကိုမှ ထွက်ခွာ မသွားပါဘူးလို့ ထပ်မံ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဗီလာရီးရဲ နည်းပြ အူနိုင်း အမ်မရီ က ငြင်းဆို အပြီး မှာတော့ နယူးကာဆယ် ဟာ ဘုန်းမောက် နည်းပြဟောင်း အက်ဒီ ဟိုဝီ ကို နည်းပြသစ် အဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ စိတ်ကူး လာခဲ့တယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
လိုက်ပ်ဇစ် အသင်းဟာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ မှာ လီဗာပူး ကနေ ထွက်ခွာ တော့မယ့် အားကစား ဒါရိုက်တာ မိုက်ကယ် အက်ဒွပ် ကို ခေါ်ယူဖို့ လှုပ်ရှား နေတယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းဟာ ဖူလ်ဟမ် မှာ ကစား နေတဲ့ ၁၉ နှစ် အရွယ် ကွင်းလယ် ဖန်တီးရှင် ဖာဘီယို ကာဗယ်လ်ဟို ကို မျက်စိ ကျ နေတယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
စပါး အသင်း ဒါရိုက်တာ ဖာဘီယို ပါရာတစ်ဆီ ကတော့ သူ နဲ့ နည်းပြသစ် ကွန်တီ တို့ဟာ ခုချိန်ထိ အပြောင်း အရွှေ့ ကိစ္စအကြောင်း စကားမပြော ကြသေးပါဘူးလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါဘီ ကောင်တီ အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ၁၂ မှတ် လျော့ချ အပြစ်ဒဏ် ကို အယူခံ ဝင်ထားပြီး လာမယ့် အပတ် မှာ အဆုံးအဖြတ် ခံယူရမယ် လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် အသင်းကတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီ မှာ ရီးရဲ မာယော့ကာ အသင်း ကစားသမား အစ်ဒရီဆူ ဘာဘာ ကို ပေါင် ၁၀ သန်း နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ အတွက် စီစဉ် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး လူငယ်လေး ဟာဗေး အီးလီးယော့ ကတော့ ဒဏ်ရာ အခြေအနေ တိုးတက် ကောင်းမွန် လာကြောင်း ဆိုရှယ် မီဒီယာ ပေါ်ကနေ ပရိသတ်တွေကို အသိပေး ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် မှာ လုပ်ကိုင်နေပြီး ရွှေဘောလုံး ဆုကို ကမကထ လုပ်ပေးတဲ့ France Football နဲ့ နီးစပ်သူ ဂျာနယ်လစ် တဦး ကတော့ လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ပေးအပ်မယ့် ရွှေဘောလုံးဆု ကို လီယွန်နယ် မက်ဆီ ရရှိမယ် လို့ ပြောဆို ခဲ့ကြောင်း သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . .
Previous Article ” ယူနိုက်တက်နဲ့ ပွဲက မနက်ဖြန် ကစားရမယ် ဆိုရင်လည်း ကစားလိုက်မှာပါ ” #ပက်ဂွာဒီယိုလာ
Next Article အက်သလက်တီကိုကို ထိန်းချုပ်ကစားကာ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ လီဗာပူးရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ နှိ်ုင်းယှဉ်ကာ မန်ယူနိုက်တက်ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဖာဒီနန်